ချင်းပြည်နယ်နေ့ နှင့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရေး အစိုးရ သဘောတူ | ဧရာဝတီ
ချင်းပြည်နယ်နေ့ နှင့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရေး အစိုးရ သဘောတူ
နန်းသီရိလွင်| December 10, 2012 | Hits:1
| | အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ နှင့် CNF ရန်ကုန်မြို့ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ၌ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က စတင် ဆွေးနွေးစဉ်(ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင်/ဧရာဝတီ)
ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး(CNF)နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့၏ ရန်ကုန်မြို့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ချင်း ပြည်နယ်နေ့ နှင့် ချင်း အမျိုးသားနေ့ သတ်မှတ်ရေး တို့ကို သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှ စ၍ ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲ၌ ယင်းသို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ချင်းပြည်နယ်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနစ် အခြေခံ ဥပဒေအရ ချင်းဝိသေသတိုင်းကို ချင်းပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ကို ချင်းပြည်နယ်နေ့ အဖြစ် လည်း ကောင်း သတ်မှတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ချင်းပြည်နယ်နေ့နဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ရဖို့၊ တရားဝင် သတ်မှတ်ဖို့က ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုရဦးမယ်။ ဒီနှစ် မကုန်ခင်မှာ ဒါတွေက ဖြစ်လာမှာပါ။ ချင်းပြည်နယ်နေ့နဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့တွေဟာ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်တွေ ဖြစ်လာမှာပါ”ဟု CNF လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၂ ဒေါက်တာ ရွှေခါးက ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်နေ့အဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တွင် အဆိုပြု တင်သွင်းမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ဆွေးနွေးခွင့်မပြုခြင်း၊ အဆိုပယ်ချခံရခြင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိခြင်း တို့ကြောင့် အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလ ၁၇ ရက်နေ့ ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ ဒါကို အပြီးသတ် ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့နဲ့ ချင်းပြည်နယ်နေ့ကို ရှင်း ရှင်းလင်းလင်း ဖော်ထုတ်ခွင့် ရတဲ့အတွက် နားလည်ပေးတဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာမယ့်၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှာ ချင်းအမျိုးသားနေ့ အောင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်အောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ချင်း အမျိုးသား ပါတီ ဥက္ကဌ ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် ဦးဇိုဇမ်က ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ချင်းရေးရာ ကောင်စီမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ချင်းအမျိုးသားနေ့ ဖြစ်သည့် ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ကန်ပက်လက်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ရာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ် လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးနောက် ချင်းဝိသေသတိုင်းကို ချင်းပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ချင်းပြည်နယ်နေ့ အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
CNF နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့၏ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အကြို ဆွေးနွေးပွဲတွင် CNF ဘက်မှ ၃၁ ချက်တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၂၇ ချက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်တွင် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့၌ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ပဏာမ သဘော တူ ညီချက် ၉ ချက်ကို လည်းကောင်း၊ မေလ ၇ ရက် က ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ဟားခါးမြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘော တူညီချက် ၁၅ ချက်ကို လည်းကောင်း သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ် သည်။
CNF သည် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Shwe Yoe December 11, 2012 - 12:44 am Peace talk and agreement between Burmese government and the KIO was ignored by the Burmese government when the KIO did not dance according to military tune. Therefore, talk after talk needs to bear fruits. So far, agreements with Karen, Shan and other ethnics bear no fruit. Therefore, this conference also gives me no hope, but wasting time.
Reply swe htwe December 11, 2012 - 3:35 pm I don’t agree to you. The current situation and intention of KIO is very complicated and influenced by foreign factors.
Reply Sai Linyone December 12, 2012 - 11:47 am You may be right. The Burmese junta has been influenced by the communist China too much. I do not like that. Buildingademocratic Union but influenced by the communists? Whatapolicy!
Reply Salai Lian December 11, 2012 - 8:27 am I hope we all can live in Peace and Tranquility in the Union. The Union of Burma can beagreatest one among ASEAN. I would like to see all the citizens of the Union one day see new dawn in which there is no more fighting between each other but love and compassion. If the current government really wants to implement it, it is very much possible. All of us will cheer to the government. Just let the seven divisions become seven states with the already existing seven states have autonomous power in the Union. I do hope that talks between other ethnic groups and the government go smooth like this one too.